Noorweey oo sharcigii kala noqotay ajaanib ay soomaalidu ka mid tahay - iftineducation.com
iftineducation.com – Noorweey oo sharcigii kala noqotay ajaanib ay soomaalidu ka mid tahay
Dalka Norway ayaa wararka eeynu ka heleyno waxaa ay sheegayaan in ajaanib ay soomaalida ka mid tahay sharciggii dal ku jooga dalkaasi lagala noqday.
Dadkaan sharciyada lagala noqday ayaa tiradooda gaareysa 800 00 qof,
waxaana ay ka kala yimaadeen Soomaaliya, Afgaanistaan iyo Ciraaq. Dadkan ayaa lugu eedeyey ineey dhawaan u baqooleen dalalkooda ay ka soo hayaameen, halka qaar kalena lugu sheegay ineey ka been sheegeen aqoonsigooda iyo codsigooda magangalyo doonimo.
Wasiiradda socdaalka dalkaasi haweeneyda la yiraahdo Sylvia Listaug, ayaa daboolka ka qaaday in baaritaano la sameeyn doono la xirriira dadyowga ka been sheegay aqoonsiga iyo dalalkii ay ka yimadeen, waxaana ay carabka ku dhifatay in dadkaasi dalka laga musaafurin doono.
Soomalida qaar ee ku nool magaaladda caasimadda ah ee Oslo, ayaa sheegay in dowladda u soo dirtay fariimo loo sheegayo in lagala noqday sharcigii ay dalkaasi ku heeysteen. Waxaa ay sidoo kale sheegeen in Noorweey aannu heeyn cadeeymo muujinayo waxyaabaha ay ku eedeeyneyso, marka laga reebbo beey yiraahdeen in dowladdu ku qamaamtay baraha bulshadda ee sida facebook-ga, twitter-ka iyo aaladaha kale ka soo arruurisay xog la xirriirta noloshooda iyo masaariifta ay diraan.
Ugu dambeyntii soomaalida Noorweey ee lugu wargeliyey in sharciyada lagala noqonayo, ayaa walaac la soo deristay tan iyo bishii ina dhaaftay markii ay soo baxeen wararkaasi dib kala noqoshadda sharcigga.
Madooneysaa In Maalin kasta Raaxo iyo Wasmo lagugu Yimaado+ Kuna Joojiso Siigada kana Baaxado Kacsiga Faraha Badan